news2dago | Oktobra 2008 | 2
[Ankapobeny ] 21 Oktobra, 2008 09:02
Miala any i ASMA
Vao tsy ela akory izay no nitsahatra ny ririnina dia efa maila any sahady ny rivodoza! I Asma izany no rivodoza voalohany hiditra an-tanety @ alakamisy raha ny loharanom-baovao. I Cnn moa dia efa niteny hoe ao anatin'ny 48 ora izy no higadona eto Madagasikara ka any @ faritr'i SAVA iny no ahina ho lalovany @ izany.
Ho an'ny eto an-drenivohitra indray dia mahonena ny mahita ity zavotany be manadala isan-kariva ity noho ny doron-tanety. Tsy hita intsony mantsy ny faritra ambony misy ny Rova sy ny lycée Andohalo rehetra iny @ hariva raha jerena avy ety Avaradoha sy Anjanahary iny manomboka eo @ 5 ora sy sasany eo. Setroka be no mandrakotra ny tanana ary tena manompo mena be izany ny faravodilanitra rehefa jerena indray ny faritra andrefana rehetra iny. Mazava ho azy fa niantona ny orana ary mamay be @ antoandro.
Vokany eo @ fahasalamana dia mamely ny gripa izay tena mahery vaika tokoa ary izay tratrany dia mandraingiraingy izay tsy izy. Azo lazaina avy hatrany fa maloto dia maloto ny rivotra iainana.
[Ankapobeny ] 19 Oktobra, 2008 09:29
Tsy nande nivavaka indray a!
Loza mihitsy fa h@ izay nisin'ny papozy izay dia nivangam-bao foana izahay angamba efa ho 4 alahady izay. Ny an'i neny moa efa ela ela ihany satria izy tsy mba nahazo nandende h@ izay nitondrany vohaka noho toe-pasalaman'izy mianaka. Mandinin-tena ihany izahay oe tena tsy mety izao atao izao kanefa tena mbola tsy afaka mihitsy izay raha ny tena marina.
Voalohany aloha dia @ 6 ora 30 maraina no miditra ny fivavahana maraina ao @nay! ny tena anefa lanaky ny torimaso @ fitaizana ny zaza @ alina dia tena ao @ le torimaso mamy mihitsy io ora fidirana io. Mahamenatra ihany mantsy ilay mamonjy fandraisana fotsiny no aleha any ampiangonana. Dia nisafidy ny tsy nandeha aloha hatreto.
Faharoa indray dia ny fidirana @ 9 ora 30 tena efa tsy nahazatra anay mihitsy. Torak'izany koa ny fivavan-kariva izay miditra @ 4 ora izay tsy misy fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Manampy izany dia any @ fianakavin-dramatoa izahay no misakafo rehefa alahady kanefa mety any @ 12 ora 30 any vao mirava ny fiangonana vokany tsy mety koa izany iny.
Soa ihany fa malalaka ny safidy omen'Andriamanitra ho antsika olombelona ka manao izay danin'ny kibony isika. Tsy mba afaka nisaotra azy akory noho ny nanomezany fahasalamana, dimby sy fara, vola aman-karena ary indrindra tombon'andro isa-maraina.
Menatra ny tenako mihitsy aho marina.
[Ankapobeny ] 17 Oktobra, 2008 13:20
Maharaka tekinolojia i Madagasikara satria dia miseho ao @ Ebit avokoa ny ankamaron'ireo zava-baovao farany nivoaka any ivelany eo @ lafiny TICs izany. Misy solosaina kely ao toy ny ultra PC sy ny karazany hafa ihany koa. Eo koa ny tolotra aterineto toy ny moov yes sy ny internet everywhere tolotra ao @ orange. Maro ny zavatra tiana ho azo fa ny vola mihitsy no tsy aharaka ka aleo mijery fotsiny aloha.
Fanatanjahatena kosa ny manaraka. Nanaitra ny sain'ny maro ny naheno ilay tolotra nomen'ny filoha ivoriana ny mpilalao baolina malagasy izay manodidina ny 500$ any isan'olona! Hafetsena io moa koa izay fika rehetra mihitsy ahazoana fandresena no atao ko anatra ho antsika ny toy izao i Benin aza mahay lavitra an'izay! ny azy tonga dia ny mpitsara mihitsy no voantsidry vola dia zao izy tafakatra tsara ary voalohany ao @ sokajiny. Kanefa toa tsy dia misy mpilalao kalaza akory ao @ ity ekipa ity.
Namonjy ny fihaonam-be faha XII ny francophonie izay atao any Quebec Kanada ny filoha malagasy. Ary hinona marimarina fa efa any an-toerana izy @ izao fotoana anoratana izao. Midika inona anefa moa ity fikambanana ity tena mahatapaka ahitra ve? Asa aloha fa amiko manokana dia tsy hitako izay vitany hatramin'izay. Ny fahitako azy dia mbola tsindry aloka avy any @ ilay voalaza oe reny malala no tsy maintsy anaovana izao. Asa ihany koa raha misy latsa-kemboka tsy maintsy efaina @ itony fikambanana itony na tsia. Dia mbola voatsetsitra an-kolaka ihany koa izany ny firenena mahantra ary i afrika no ankamarony satria tsy misy hazon-damosina.
Vao tsy ela akory izao no nahilika tsy anisan'ny mpikambana ao intsony i Mauritanie satria voalaza fa tsy misy ny demokrasia any noho ny fakan'ny miaramila ny fanjakana tany an-toerana. Dia izay fotsiny ny sazy omena azy fa tsy misy mihitsy ny oe fanampahan-kevitra hafa mivantana noraisana. Ny tiako lazaina dia ny oe inona no fepetra hafa tena mihatra mivantana @ ilay naka fahefana @ basy sy ny hery. Ho hita eo aloha izay hodinihina any fa aleo tsy manao be lazao eto fotsiny.
[Ankapobeny ] 11 Oktobra, 2008 19:11
Baiboly ao anaty Finday
Mifarana ny herinandro tokony hiala sasatra ny rehetra ny ara-panahy kosa tsy mba tokony hisy hakana sasatra izany. Efa andron'ny fandrosona moa izao ka rariny loatra raha ampiasaina ny tekinolojia vaovao sy avo lenta! Koa raha sendra manana irony finday efa somary raitra sy azo ampidirana hira sy dossier irony ianao dia azonao alaina eto ny Baiboly efa voadika @ teny malagasy. Ataoko fa mety hanampy anao izy ity. Ampidirina ao anaty finday izy io mazava ho azy fa mbola extracter-na aloha vao afindra any anaty finday. Koa mazotoa mamaky baiboly sy mizara izany teny izany ho an'ireo namana rehetra. Isaorana ireo nanampiniavana nandika izany hatraminy farany ka nahazoana izao vokatra izao.
Vaovao ratsy kosa aloa no tanteriko manaraka satria dia nisy namaky t@ alarobia hifoha alakamisy ny trano fiasan'i news2dago ary very t@ izany ireo fitaovana sasany tao ampiasana. Atao ahoana fa izay no anjara sy lahatra ary ny zavatra rehetra dia miara miasa ho an'reo izay tia an'Andriamanitra. Lesona azoko notsoahana t@ izao dia nataoko tsirambina ny hamafiny ny hiditrano. Soa ihany fa mbola tsy nanitatra ny ambaidainy ny kapitaly ny tena no nitranga izao zavatra izao fa vao nikasa! kanjo efa nomen'ilay nahary fanairana sahady oe tokony hanamafy ny hiditrano sy hanao alarme sy ny sisa izay rehetra mety ilaina @ fiarovana ny fananana.
Manarak'izay dia tapitra hatreo ny lalana ho an'ny barea t@ can sy ny coupe du monde 2010 satria dia lavo 3 no 0 tany @ elefanta izy no sady naharesy 1 no 0 an'i Botsoana koa i Mozambika. @manaraka indray manarina e!lol laharana faha 3 no misy antsika ao @ sokajy faha 7 narahako mivantana tao @ live coverage ny fifa moa io lalao io.
Na dia teo aza izany vaovao rehetra izany dia tsy maintsy mijery ny ho avy foana no tanjona ary manakina ny fiainana @ Andriamanitra hatrany. Izy no mahafantatra ny mahasoa ny zanany rehetra. Koa mahereza daholo no samy ho tahin'ny Tompo.